Kenya oo sheegtay in aysan marnaba ciidankeeda ka saari doonin Soomaaliya – STAR FM SOMALIA
Kenya oo sheegtay in aysan marnaba ciidankeeda ka saari doonin Soomaaliya
Dowladda Kenya ayaa waxa ay si cad u sheegtay inaysan marnaba ka saareyn gudaha dalka Somaliya ciidamada Kenya ee howlgalka Amisom qaybta ka ah, xilli Kenya ay xadgudub toos ah ku soo sameysay dhul Somali ay leedahay.
Xoghayaha Wasaarada Gaashaandhiga dalka Kenya oo la hadashay Idaacada BBC ayaa sheegtay ciidamada Kenya inay Somaliya u joogaan si waafaqsan shuruucda iyo nidaamka ay ku joogaan ciidamada Amisom ee dalalka kale ka socda.
‘’Kenya waxay qeyb ka tahay Amisom waxayna ku shaqeysaa shuruucda Amisom iyo weliba aragtida hawlgalka ciidamada Amisom, Soomaaliya iskama joogno waxaan halkaas u joognaa midowga Africa iyo beesha caalamka kuwaas oo taageeraya dadaalkeena ku aadan sidii loo dejin lahaa dalka Soomaaliya, waxaan is leeyahay xaaladaaan oo kale waxaa jira kara dhacdooyin siyaasiyiintu waxay yiraahdaan kan kaas iyo waxtaabo laakiin muhiimaddu waxay tahay inaan xoogga saarno xasiloonida dalka iyo inaan diiradda saarno dagaalkan wanaagsan ee hadda aan ka wadno Soomaaliya, waxaan sii ahaan doonnaa Amisom illaa Amisom ay ku guuleysato hadafkeeda.” ayeey tiri Rijel Umamo
Hadalka ka soo baxay Wasaarada Difaaca dalka Kenya ayaa ku soo aadeysa, iyadoo Baarlamaanka Somaliya ay ka shireen waxa laga yeelayo ciidanka Kenya ee Somaliya jooga, inkastoo Baarlamaanka ay soo saareen qaraar la xiriira ciidankaasi.
Dowladda Somaliya ayaa maanta oo tallaado ah waxa ay guddi xaqiiqo raadin ah u direysa Magaalada Belad Xaawo ee Gobolka Gedo si loo soo eego waxa ka jira in ciidanka Kenya ee xuduuda ku sugan xadgudub ay ku sameeyeen dhul Somali ay leedahay.
Eedeymo kala duwan ayaa loo jeediyay ciidamada Kenya ee Somaliya ku sugan, eedeymahaasi waxaa ka mid ah in dhuxul sharcidaro ah dekada Kismaayo ka dhoofiyaan iyo in Sonkorta Koontarabaanka ah ciidanka ka ganacsadaan.
Guddi xaqiiq raadin ah ayaa maanta u ambabixi doona degmada Beled-Xaawo ee Gobolka Gedo